July 2020 - PARIJATMEDIA
Jul312020 by adminNo Comments
वि.सं.२०७७ साउन- १७, शनिवार,ई.सं. २०२० अगष्ट -१,शक संवत्-१९४२,नेपाल संवत्-११४० गुँलाथ्व,प्रमादी,दक्षिणायन,वर्षा,श्रावण शुक्लपक्ष तिथि-त्रयोदशी , २१:३७ बजे उप्रान्त चतुर्दशी,नक्षत्र -मूल , ०७:४४ बजे उप्रान्त पूर्वाषाढा,योग-वैधृति , ११:०८ बजे उप्रान्त विष्कम्भ,करण-कौलव १०:१० बजेदेखि तैतिल , २१:३७ बजे उप्रान्त भद्रा,चन्द्रराशि-धनु,आनन्दादि योग-गद, सूर्योदय-५:२८, सूर्यास्त-१८:५१,दिनमान-३३ घडी २८ पला, व्रत/पर्व-शनि–प्रदोष व्रत। मेष (चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) – लगनशिल तथा मेहनेतले चाहेको उपलब्धि हासिल हुँनेछ । परिवारका साथ लामो दुरिको धार्मिक तथा शैक्षिक यात्राको प्रवल सम्भावना रहेकोछ। खोज तथा अनुशन्धानमा समय लगानि गर्नेहरुले राम्रो नतिजा हात पार्न सक्ने योग रहेकोछ । पढाई लेखाईमा अरुदिन भन्दा सुधार भएर जानेछ। कुनै पनि क्षेत्रमा आउने प्रतिष्पर्धिहरुलाई सजिलै हराउन सकिनेछ । माया प्रेममा एक
यस्ता ५ कुराले पुरुषलाई बनाउँछ लाजमर्दो
पुरुष र महिलामा धेरै फरक हुन्छ । पुरुषहरूलाई कैयौं कारणले लाजमर्दो स्थितिमा पु–याउँछन् । कतिपय पुरुषलाई कपाल खसेर अनि कतिपयलाई पाइताला गनाएर लाजमर्दो स्थिति आउँछ । यसबाट बच्ने उपाय हामी बताउँछौं । मोटोपना– अनियमित र गलत खानपानका कारण मानिसहरू मोटोपनाको शिकार हुन पुग्छन् । यसबाट बच्नका लागि दिनदिनै लौकाको जुस पिउने गर्नुस् । यसले मेटाबोलिजम बढाउँछ र मोटोपना तीव्रताका साथ कम गर्छ । अनावश्यक रौं– पुरुषको छाती र पिठ्युँमा भुत्ला पलाएर फोहोरी देखिने बनाउँछ । यसको उपाय भनेको बेसार र दही मिसाएर छालामा दल्नुस् । अनि सुकेपछि हलुका हातले रगड्नुस् र धुनुस् । पाइताला गनाउने– पाइताला गनाएमा बेसनमा दही मिसाएर लगाउनुस्। दुर्गन्ध भाग्छ। कपालको चायाँ– बेकिङ सोडामा दही हालेर कपालमा लगाउनुभयो भने चायाँ हटेर जान्छन्। तालुचिण्डे– यसका लागि मेथीका दाना र काला दाना (कलौंजी) को पेस्ट नरिवलको तेलमा
डरलाग्दो भयो कोरोना: एकै दिन ४ जनाको निधन
काठमाडौं । कोरोना संक्रमितको संख्या बढेसंगै अप्रत्याशित रुपमा निधन हुनेको संख्या पनि बढेको छ । शुक्रवार एकै दिन कोरोनाका कारण ४ जनाको निधन भएको पुष्टि भएको छ । एकै दिन यति धेरै मानिसको निधन भएको यो पहिलो पटक हो । योसँगै नेपालमा कोरोनाले ज्यान गुमाउनेको संख्या ५६ पुगेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा। जागेश्वर गौतमका अनुसार पर्साको वीरगन्जका थप तीन जना र ललितपुरको पाटन अस्पतालमा उपचाररत एक महिलाको कोरोनाले निधन भएको पुष्टि भएको हो । पाटन अस्पतालको आईसीयूमा उपचाररत ६५ वर्षीया उनको शुक्रबार बिहान ९ निधन भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको हो । उनी गत साउन ६ गते उनलाई अस्पताल भर्ना गरिएको थियो । मृतक महिला ललितपुर थसिखेलकी बासिन्दा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । उनी केही दिन अघि बीरगञ्जबाट आएकी थिइन् । यसैगरी वीरगन्जमा एकै दिन थप तीन जना कोरोना संक्रमितको निधन भएको हो । पर्साका ५६ वर्
नेपाल एक स्वतन्त्र मुलुक हो ,यसैले कुनै पनि मुलुकले नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न पाउदैन : चिनियाँ राजदुत होउ यान्छी
नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले नेपाल एउटा स्वतन्त्र मुलुक रहेको र कुनै पनि मुलुकले नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्नु नहुने बताएकी छिन् । पछिल्लो समय नेपालको आन्तरिक मामिलामा चीनको हस्तक्षेप बढेको आरोप लागिरहँदा उनले मुलुकबीच विकास र द्विपक्षीय सहयोगबारे विचार आदानप्रदान हुनु भनेको एउटा सामान्य कूटनीतिक कार्य भएको र सामान्य भेटघाट एवं फोन संवादलाई पनि आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेपका रूपमा लिने नहुने जिकिर गरेकी हुन् । नयाँ पत्रिकाका लागि नरेश ज्ञवालीसँगको अन्तरवार्तामा उनले भनेकी छन्, ‘नेपालको छिमेकी मित्रका रूपमा हामी नेपालले स्थायित्व र एकता कायम राखेको हेर्न चाहन्छौँ । जुन राष्ट्रिय विकासको पूर्वसर्त हो । नेपाले सरकारले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नारा अघि सरेको छ र आफ्नो सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको सुरक्षा गर्न कटिबद्ध छ । हामी नेपालको प्रयासको सम्मान र समर्थन ग
घरभाडामा बस्नेहरुका लागि खुसीको खबर ! सर्वोच्च अदालतले गर्यो यस्तो आदेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कोरोना फैलन नदिन सरकारले लागू गरेको लकडाउनको समयमा घरभाडा तिर्न नसक्नेहरुलाई पनि घरवाट निकाल्न नपाउने आदेश जारी गरेको छ । लामो समय सम्म लकडाउन भएर काम विहिन भएका कारण भाडा तिर्न नसकेकालाई घरवाट ननिकाल्न अदालतले आदेश जारी गरेको हो । न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र कुमार रेग्मीको इजलासले बन्दाबन्दीका समयमा घरमा बसेका नागरिकलाई घरभाडा तिर्न नसकेको अवस्थामा घरबाट ननिकाल्न आदेश जारी गरेको हो । घरभाडा तिर्न नसक्दा घरभेटीले समस्या पारे तत्काल वडा कार्यालयमा खबर गर्न पनि अदालतको आदेशमा भनिएको छ । “बन्दाबन्दीको अवधिको भाडा तिर्न नसकेका कारण घरबाट निकाल्न, निक्लन बाध्य पार्नेजस्ता दुव्र्यवहार नगर्नु, यसरी दु व्र्य वहार भएमा स्थानीय वडा कार्यालयले सुपरिवेक्षण गर्नु”, आदेश भनिएको छ । आदेशमा स्थानीय तहले राहत बाँड्दा घरबहाल कर तिरेको रसिद माग गरेकाले घर भाडामा बस्नेले नागर
काठमाडौँ। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट ललितपुरस्थित पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचाररत एक जनाको मृत्यु भएको छ। शुक्रबार बिहान ६५ वर्षीया वृद्धाको मृत्यु भएको अस्पतालले जनाएको छ। उनी तराईबाट रिफर भएर पाटन पुगेकी थिइन्। उपचारका लागि साउन ६ गते पाटन अस्पताल भर्ना भएकी थिइन्। उनलाई आईसीयूमा राखेर उपचार भइरहेको थियो। बिहीबार साँझदेखि उनलाई श्वासप्रश्वासमा समस्या देखिएको थियो। उनी उच्च रक्तचापबाट पीडित रहेका थिए। योसँगै नेपालमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ५६ पुगेको छ।
अब भदौ १ देखि विद्यालय खोल्ने सरकारको निर्णय ! यस्ता छन् बिशेष सर्तहरु – जानकारीको लागी स सक्दो शेयर गरौँ।
काठमाडौँ । कोरोना महामारीका कारण चैत ११ बाट बन्द गरिएका विद्यालयहरु सरकारले खोल्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको बैठकले भदौ १ गतेदेखि विद्यालयको भर्ना खोल्ने निर्णय गरेको हो । त्यस्तै, विद्यालयलाई क्वारेन्टिन स्थल नबनाउने निर्णय पनि गरेको छ । साथै विद्यालयले २०७६ ७७ का लागि लिएको परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिसक्न भनेको छ । बिहीबार सरकारका निर्णय सुनाउँदै प्रवक्ता समेत रहेका अर्थ तथा सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भर्ना भएका विद्यार्थीको शैक्षिक तथ्याङ्क राख्ने, विद्यालय शिक्षकहरुलाई अभिलम्ब विद्यालय पुर्याउने व्यवस्था गर्ने, क्वारेन्टिन बनाइएको विद्यालयबाट त्यसलाई ह’टाउने निर्णय गरेको जनाए । खतिवडाले भने,‘नतिजा प्रकाशन गर्न बाँकी रहेको भए प्रकाशन गर्ने, २०७७ भदौं १ देखि नयाँ विद्यार्थी भर्ना गर्ने, कक्षागत रुपमा विद्यार्थीको संख्या एकिन गर्ने, भर्ना भएका विद्या
७ बर्षअघि ३ दिनमा आउछु भनेर गएका श्रीमान बेपत्ता, खोजिदिन श्रीमतीको आग्रह, हेर्नुहोस भिडियो
पोखरा- वैवाहिक बन्धनमा बाँधिएको ३ वर्ष नपुग्दै श्रीमान बे-पत्ता भएपछि एक महिला र उनका एक ८ बर्षका छाेरा विचल्लीमा परेकी छन् । उनको नाम चन्द्रकला तामाङ्ग हाे भने माइत इलामको फिरिम गा.वि.स वडा नं.४ रहेकाे उनले बताएकी छिन् । त्यस्तै, लम्जुङ जिल्ला चन्द्रेश्वर नगरपालिका ८ घर भएका उनका श्रीमान कृष्ण बहादुर भुजेल ७ बर्षअघि तिन दिनमै अाउछु भनेर गएका उनि आजसम्म पनि गायव छन् । चन्द्रकलाले बास्तविक कथा सबै बताएकी छिन् । उनका श्रीमानसँग भेट कसरि भयाे? भनेर प्रश्न गर्दा उनी भन्छिन्, कृष्णसँग इलाममा काम गर्ने क्रममा भेट भएकाे बताएकी छिन् । उनी सँग काम गर्ने क्रममा कृष्ण बहादुर भुजेलसँग भेट भएको साथै उनले काम गर्दा गर्दै उनी कृष्णले उनलाइ बिहे गर्नकाे लागि फकाएर प्रस्ताव राखेकाे बताउछिन् । कृष्णले तिमि मसँग जसै जानुपर्छ यर्थात बिहे गर्नु पर्छ, यदि बिहे नगरेमा कृष्णले ज्यान फाल्ने ध-म्की समेत दिएकाे उ
निर्घात कुटिएका सुरक्षा गार्डको भाइरल भिडियोबारे छानविन गर्दै दूतावास (भिडियो)
काठमाडौँ । मलेसियामा एक सुरक्षा गार्ड कु’टिएको भिडियोबारे मलेसियास्थित नेपाली दूतावासले छानबिन गर्ने भएको छ । सामाजिक सञ्जालमा यो भिडियोमा कु’टिने सुरक्षा गार्ड नेपाली भएको दावी गरिएको छ । तर, उनी नेपाली नै हुन् वा अन्य कुनै देशका नागरिक हुन् भन्नेबारे स्पष्ट भइसकेको छैन। नेपाली दावी गर्दै सामाजिक संजालमा भिडियो भाइरल भएपछि क्वलालम्पुरस्थित नेपाली दूतावासले आफ्नो ग’म्भीर ध्यानकर्षण भएको जनाएको छ । केही दिनयता सामाजिक सञ्जालमा एउटा भिडियो भाइरल भइरहेको छ । भिडियोेमा एक व्यक्तिले नि’र्घात रुपमा युनिफर्ममा रहेका (सम्भवतः ड्युटीमा रहेका) एक सुरक्षा गार्डलाई कु’टेको देख्न सकिन्छ । अहिले त्यो भिडियोलाई विशेषतः विदेशमा बस्ने नेपालीहरुले सामाजिक सञ्जालमा मलेसियामा नेपाली सुरक्षा गार्डलाई कु’टिएको भनेर शेयर गरेका छन्। Rama Wali / रमा ओलि@Ramawali77677 मलेसियामा एक
“पूजा शर्माले सामाजिक,सञ्जालमा सार्वजनिक गरिन्” (यस्ता ४ तस्बिर)
नेपाली सिनेक्षेत्रमा पछिल्लो समयकि निकै नै लोकप्रिय नायिका पूजा शर्माले सामाजिक सञ्जालमा फेसबुक र इन्स्टाग्राममा केही नयाँ तस्बिरमा सार्वजनिक गरिकी छन् ।पछिल्लो समय उनी महंगो पारिश्रमिक लिने नायिकाको सूचीमा पनि अटेकी छिन् । उनी अभिनित फिल्म ‘पो’इ पर्‍यो काले’समेत प्रदर्शन भैसकेको छ । जुन चलचित्र अपेक्षिकृत नभए पनी सामान्य भएको थियो । युट्युबमा समेत उपलब्ध भैसकेको छ ।" राम्रो फ्यान फलोइङ कमाएकी पूजा शर्मालाई क’न्ट्रोभर्सी क्वीन पनि भनिन्थ्यो कुनैबेला । अहिले भने उनी खासै वि’वादमा आउँदिनन् । फिल्म रिलिजका बेलामा मिडियामा छाउने र अरु बेला खासै चासो नदिने पूजा सामाजिक सञ्जालमा भने सक्रिय रहने गर्छिन् ।फिल्म र अभिनयकै कारण चर्चामा आउन चाहने पूजाले सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना तस्वीर शेयर गरिरहेकी हुन्छिन् । हामीले सामाजिक सञ्जालमा शेयर गरिएका उनका केही तस्वीर यहाँ प्रस्तुत गरेका छौँ:"